Posted by Tranquillus | Mar 26, 2021 | Shabakada
Talaadadii Maarso 9, 2021, La Filière Française de l'Eau ayaa daabacday iskaashi iyo maalgelin Wasaaradda Shaqada, Shaqada iyo Isdhexgalka daraasad PIC EDEC ah oo ay sameysay Ernst & Young, oo diiradda lagu saaray shaqaalaynta, xirfadaha iyo tababarka 2025. Daabacaaddan aadka u hodanka ah ayaa fursad u ah dib-u-soo-helidda xirfadaha kala duwan iyo waddooyinka xirfadeed ee suurtogalka ah ee waaxda biyaha ee qorta dhammaan cayaartoyda.
Daraasadu waxay daboolaysaa wareegga ugu weyn ee jilayaasha ka shaqeeya Waaxda Biyaha Faransiiska ee ku baahsan geyiga qaranka oo dhan, iyo sidoo kale wareegga biyaha yar iyo weyn. : adeegyada maareynta biyaha dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay, bixiyeyaasha adeegga injineernimada, warshadleyda iyo soo saarayaasha qalabka takhasuska leh, dhismayaasha wax dhisaya, maamullada loo igmaday, hay'adaha ka shaqeeya hay'adda, tababarka iyo cilmi baarista
124 FTE iyo ku dhowaad boqol meheradood
Iyadoo shaqooyinka 124 ay socdaan sanadka 000, ciyaartooyda qeybta biyaha Faransiiska waxay ka kooban yihiin xirfado kala duwan. Qeybtu waxay leedahay in kabadan boqol inkasta oo aysan lahayn nidaam tixraac midaysan. Tani waxay tarjumaysaa a heerka sare ee baahinta baahidooda si loo hubiyo dhammaan hawlgalladeeda, marka loo eego qaybaha kale ee la midka ah.
Qeybta Biyaha ayaa soo saartay markii ugu horeysay daraasad "Shaqo, Xirfado iyo Tababar" July 10th, 2021Tranquillus
READ Maarso 8, 2021 Sidee loo hagaajiyaa abaabulka tababarka shaqaalaha? Tallaabooyinkee ayaa la door bidaa iyadoo loo eegayo baahiyaha muddada-gaaban ama muddada-dhexe ee la-qabsiga ama horumarinta xirfadaha gudaha? Tabobar ma ku tiirsanaanta ilaha "gudaha" ama adoo adeegsanaaya adeeg bixiyeyaal dibadda ah? Inta lagu jiro ama ...
horeMarxaladda qabyada ah in si fiican loo qoro
socdaHeshiisyada wadajirka ah: loo shaqeeyuhu waa inuu muujiyaa inuu si wanaagsan u abaabulay la socoshada culeyska shaqaalihiisa maalmaha xirmooyinka